Google ga-eme ka anyị mata onye na-akwado mgbasa ozi | Gam akporosis
Google ga-eme ka anyị mata onye na-akwado mgbasa ozi
Mgbasa ozi dị na ntanetị, site na akwụkwọ akụkọ na blọọgụ, site na vidio YouTube, nyocha, ozi ịntanetị ... Mana ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ na-eji ịnwa ịbịakwute ndị mmadụ, kamakwa site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mere na ozi ha ruru ọtụtụ mmadụ ọ bụ ezie ha na-ejikwa ya ghahie ihe ọmụma.
Afọ ole na ole gara aga, Google, n'ihi ọkwá ya kachasị elu, chọrọ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agba ọkwa ntuli aka kpughee njirimara ha ma ị ga-ezo n’azụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ. Iwu nkwenye ahụ ga-emetụta ihe mgbasa ozi Google niile ka ndị ọrụ wee nwee ike izute ndị mgbasa ozi ozugbo.
Google ga-egosiputa ozi nke onye mgbasa ozi ahụ na igbe mgbasa ozi iji "nyekwuo nghọta ma nye mgbasa ozi gị ozi ndị ọzọ gbasara ndị na-akpọsaa ha." Onye ọ bụla na-akpọsa ngwa ahịa chọrọ ịzụta mgbasa ozi na netwọkụ Google ga - eme ya mezue mmemme nkwenye.
Usoro nkwenye a, na-amanye ndị mgbasa ozi niile iji gosi njirimara nke ndị nchịkwa nke ụlọ ọrụ ahụ, akwụkwọ nke mgbakwunye na mgbakwunye na akwụkwọ ọ bụla ọzọ iji gosipụta mba ha nwere isi ụlọ ọrụ ha ...
Na omume, ndị ọrụ nwere ike imeghe menu ndọpụta nke mgbasa ozi na-egosi n'elu nsonaazụ ọchụchọ iji mụta "Banyere onye mgbasa ozi" na-egosi aha ụlọ ọrụ n'azụ mgbasa ozi na ebe ha nọ.
Mana na mgbakwunye, ọ ga-enye anyị ohere zere ịga n'ihu na-ahụ ụdị ozi ndị a n'ọdịnihu, site na ịpị nkọwapụta mgbasa ozi na ịchọpụta igbe "Gosi X", ọ bụ ezie na n'oge a anyị amaghị otú a ga-esi tinye ọrụ a n'ọrụ na weebụsaịtị ndị ọzọ na-ejikọ mgbasa ozi Adsense na ngwa ndị ọzọ.
Google na-ekwu na usoro ọhụrụ a "ga - enyere aka ịkwado ahụike nke usoro mgbasa ozi dijitalụ dijitalụ, na-ewepụ ndị na-eme ihe ọjọọ na ịmachi mbọ ha ịgha ụgha ha ma ọ bụ nke ndị ọzọ." Maka ugbu a, ọrụ ọhụrụ a ga-amalite ịdị na United States, iji nwayọọ nwayọọ gbasaa n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga-eme ka anyị mata onye na-akwado mgbasa ozi
Realme X50m 5G: Ntinye ego ohuru nke ezinụlọ X50
IQOO Neo3 bụ Snapdragon 865 ọhụrụ nwere ihuenyo 144 Hz